I-China Isetshenziselwe Izimoto Zokuthekelisa.
Ngokushintshwa kwentengo yokuncintisana, intengo yezimoto ezintsha nezisetshenzisiwe eChina iyaxhuma kancane kancane nemakethe yamazwe omhlaba, ikakhulukazi intengo yezimoto ezisetshenzisiwe ishibhile futhi ishibhile. Vele, izimoto eziningi emotweni esetshenzisiwe ...
Imikhiqizo yamaShayina yezimoto isiqala ukwakha isigaxa esikhulu sezimoto zase-Australia. Ngabe imakethe izosinda yini ebudlelwaneni obuwohloka ngokushesha bamazwe? IZIMOTO EZILINDELE UKUTHENGELWA KWIMakethe EMHLABENI EJIANGSU, ECHINA (IMAGE: TOP PHOTO / ...
I-China ibe yithekelisi yezimoto esetshenzisiwe enkulu kunazo zonke emhlabeni
I-China inezimoto ezingaphezu kwezigidi ezingama-300 ezibhalisiwe futhi kugxilwe kakhulu ezimotweni ezizayo zikagesi nezizimele, izwe lizoba ngumthengisi wezimoto omkhulu kunabo bonke emhlabeni ngaphambili. Ngokugxila okwandayo kuma-EVs nokuzimela ...